hitsirika ny ezaka nataon`i Madagasikara amin`ny famongorana ny kolikoly. Anio dia hanomboka ny iraka hampanaovina azy ny CCUAC izay hiompana amin`ny fanentanana an`ireo fitondram-panjakana, ireo hery politika maro samihafa… hanohy ny ezaka efa natomboka. Tanjona dia ny fanatsarana ny fampiharana ny fifanarahana miaraka ny Vondrona afrikanina manoloana ny ady amin`ny kolikoly. Ny AAACA indray dia hamolavola ny fandraisana ny fihaonambe isan-taona, izay hatao amin`ny volana jona 2020, eto Antananarivo. Ny 19 hatramin`ny 22 novambra izao moa no hanatanterahana izany. Tanjon`ity delegasiona ity moa dia ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin`ireo mpikambana ao aminy amin`ny alalan`ny fanentanana sy fanabeazana ireo olom-pirenena, indrindra ny fampiharana ny lalàna.